व्यवसायका लागि आउटसोर्सिंग सोशल मीडिया
शुक्रबार, मे 27, 2016 Douglas Karr
सामाजिक मिडिया सगाई साना कम्पनीको लागि कठिन काम हुन सक्छ। जब म एक व्यक्तिगत ब्रान्डिंग दृष्टिकोणबाट सक्रिय छु, हामी इमान्दार भई हाम्रो कर्पोरेट सोशल मीडिया उपस्थितिमा एक ठोस रणनीति र स्रोत समर्पित गरेका छैनौं। त्यो आजको रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ, यद्यपि हामीले प्रयोगको र्‍याम्पमा जोडदार हाम्रो एजेन्सीको निम्न विकास गर्न।
हामीले केहि सामाजिक मिडिया आउटसोर्सिंगको साथ हाम्रो कुराकानीहरू अनलाइन बढाउन प्रयोग गरेका छौं, तर यो इमान्दारीपूर्वक कहिल्यै राम्रो भएको छैन। हामीले प्राय: डरलाग्दो अपडेट, गरीब सामग्री क्युरेसन, र समग्र मैलो प्रस्ताव भेट्टायौं। जोरको प्रस्ताव छ, कुनै पनी छैन, हामीले अहिले सम्म देख्यौं कि सबै भन्दा राम्रो। जबकि यो एक समग्र सामाजिक मिडिया रणनीति होईन, सेवा तपाइँको समग्र लक्ष्य को वरिपरि केन्द्रित छ। तपाईं कोसँग (संभावनाहरू, प्रभावकर्ताहरू, ग्राहकहरू) को साथ जागरूकता सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई के गर्न चाहनुहुन्छ?
सेवा निम्न तीन सजिलो चरणहरूमा टुक्रिन्छ:
प्रोफाइल बनाउनुहोस् - केहि आधारभूत जानकारी साझा गर्नुहोस् जोडदार र तीनीहरु तपाइँको ब्रान्ड को लागी एक अद्वितीय सामग्री प्रोफाइल बनाउने छ।
तपाईंको अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नुहोस् - अमेरिकामा आधारित लेखकहरूले तपाइँलाई हरेक हप्ता आश्चर्यजनक सोशल मिडिया सामग्री सिर्जना र पठाउँदछ।
समीक्षा र तालिका - अद्यावधिकहरू समीक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि जोडदार तपाइँको लागि तपाइँको नेटवर्कमा तिनीहरुलाई पोष्ट गर्नेछ।
तपाइँको सामग्री रणनीति ट्युन गर्न कब्जा गरिएको जानकारी व्यापक छ। तपाईको कम्पनी र आदर्श ग्राहकको विवरणको साथ सुरू गरेर तपाईले आफ्ना सबै सामाजिक खाताहरू थप्नुहुन्छ, ग्राहक, प्रभावकारी, वा सम्पर्कहरूको लक्षित खाता थप्नुहुन्छ, कति साझा गर्नुहुन्छ बाह्य सामग्री वा आन्तरिक सामग्री समायोजन गर्नुहोस्, शीर्ष स्रोतहरू प्रदान गर्नुहोस् जुन थप्न सकिन्छ मिक्स गर्न, र शीर्षकहरूमा तपाइँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो टोन पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ - यो अनौपचारिक वा औपचारिक हो।
यदि तपाईं एक एजेन्सी हुनुहुन्छ भने, तपाईं बहु ग्राहक प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, बल्क योजना चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्रत्येक ग्राहकको सामाजिक सामग्री ट्युन गर्नुहोस् र अपडेटहरूको फ्रिक्वेन्सी आवंटित गर्नुहोस्।
निःशुल्क निःशुल्क को लागी प्रयास गर्नुहोस्!
यो सेट गरिएको छैन र यो बिर्सनुहोस्
दिमागमा राख्नुहोस् कि यसले मात्र तपाईंको सोशल मिडिया खाताको उपयोग, तपाईंलाई खोज्न, क्युरेट गर्न, र जडान गर्न मद्दत गर्दैछ। हाम्रो एजेन्सीका कर्मचारीहरूले अझै पनि हाम्रो कर्पोरेट च्यानलहरू मार्फत अपडेटहरू साझेदारी गरिरहेका छन्, हाम्रा ग्राहकहरू र उनीहरूको सफलताको बारेमा अपडेटहरू साझा गरिरहेका छन्, र हामी कुनै पनि अनुरोधहरूको जवाफ दिनको लागि सामाजिक मिडियाको निगरानी गर्दैछौं। एक उपकरण जस्तै जोडदार तपाइँको सम्पूर्ण सामाजिक मिडिया रणनीति बदल्नको मतलब होइन; यसलाई बढाउनको लागि त्यहाँ छ।
खुलासा: हामी हाम्रो व्यक्तिगत पदोन्नति कोडको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं जोडदार, जसले तपाईंको खातामा क्रेडिट गर्दछ यदि तपाईंले साइन अप गर्नुभयो।
टैग: जोडदारआउटसोर्स सामाजिकआउटसोर्स सामाजिक मिडियाआउटसोर्स सोशल मीडिया अपडेटहरूसामाजिक मिडिया आउटसोर्सिंग